Saldhiga Imaaraadka ee Berbera oo la Xaqiijiyey Xiliga la Furayo |
Saldhiga Imaaraadka ee Berbera oo la Xaqiijiyey Xiliga la Furayo
Saldhiga Millatari ee Dalka Imaaraadka Carabtu ku furanayo magaalada Berbera ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa sida la sheegay in la furi doono Bisha June ee sannadka fooda innagu soo haya,siday ay weriyeen ilo diblomaasiyadeed.
Sidaasna waxa lagu sheegay warbixin uu maanta daabacayWarsidaha Bloomberg ee dalka Maraykanka oo Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA, ka soo xigatay qormadan. Warku wuxuu intaas ku daray saldhiga Millatari ee Imaaraadkahawlaha uu qaban doono ay ka mid tahay inuu ilaaliyo xeebaha Somaliland.
Saldhigan Millatari ee Imaaraadku ayaa la weriyey inu u ilaalin doono marsada Berbera iyo xeebta Somaliland oo dhererkeedu yahay 800 oo Km.
Danjirihii hore ee Somaliland u fadhiyey Imaaraadka carabta, Md. Baashe Cawil Cumar, ayaa bayaamiyeyin budhcad baddeedu ay maraakiib ka qafaasheen xeebahaSomalilandbishii March ee kal-hore.
Safiir Baashe Cawil ayaa waraysi lagaga qaaday Hargeysa kusheegay in millatariga Imaaraadka carabtu aytaageeri doonaangobolka oo dhan, isla markaana ayla tacaali doonaan Budhcad baddeeda, kalluumaysiga sharci darrada ah iyo sunta lagu daadinayo badaha .
Mr. Baashe waxa uu xusay in dalka Imaaraadka Carabtu noqday xuddunta ganacsiga gobolka, sidaas darteedna aanay arrintaasi u suurtogeli karin haddii aanay ilaalin ganacsigabadaha iskaga gooshaya.
Waxa kalooBaashe Cawil caddeeyey in saldhiga Berberaoo cabirkiisu yahay42 km oo laba jibaaranuu iskugu jiro saldhig millatari iyo laba madaar,waxaanu xaqiijiyeyin mid ka mid ah labadaas madaar uu boqolkiiba lixdan dhammaaday.